OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: September 2012
US Jinghpaw Wunpawng ni Myen Gumsan Thein Sein hpe Ninghkap N-gun Madun
US Jinghpaw Wunpawng ni Myen Gumsan Thein Sein hpe Ninghkap
New York September 27, 2012
Daini September 27 ya shani American Mungdaneshanu nga ai mungdaw shagu na Jinghpaw Wunpawng Amyu sha ni gaw UN Zuphpawng hte kaga ahkyak ai zuphpawng niamatu gan du nga ai Myen gumsan U Thein Sein hpe ninghkap shawa n-gun madun ai lam galaw lai wa sai hpe chye lu ai, n-gun madun ai lam hpe UN Rung daju shawngeshani ka-ang12:00 – 2:00 pm lapran galaw ai rai nna 3:00 – 5:00 pm lapran hta gaw UN – Myanmar Mission rung shawngegalaw ai re hpe chye lu ai. Shang lawm ai marai yawng (70) jan rai nhtawm Kachin Alliance ningbaw ni rai nga ai, Slg. Hkangda Brang San Awng, Dr. Maran Naw Mai, Shayi Lahkyen Ja Seng Mai ni kaw na woi awn ningbaw ai re hpe matut chye lu ai.
Shingrai UN – Myanmar Mission rung ndawen-gun madun nga ma yang Myen Dat Kasa Rung salang ni kaw nna kata de saw shaga ai hte maren ningbaw ni rai nga ai Slg. Hkangda Brang San Awng, Dr. Maran Naw Mai hte Shayi Lahkyen Ja Seng Mai ni gaw Myen Dat Kasa Rung kata de shang shaga ma ai lam hpe ningbaw ni kaw na tsun dan wa ai, Kachin Alliance ningbaw ni hpe hkrum shaga ai Myen salang ni gaw U Khin Yi(Immigration), U Thein Htay(Border Affair) hte Myen Dat Kasa U Than Shwe ni rai ma ai lam hpe matut chye lu ai. Shingrai hkrum shaga ai lam hta Myen salang ni kaw nna ya ten Myen Asuya hte laknak lang rawt malan nga ai Ethnic groups malawng hte Cease Fire galaw lu sai lam, Kachin ni hte naw ginrat nga ai lam ni hpe sanglang dan ai lam chye lu ai..U Thein Htay kaw na tsun ai gaw media hte shingganetsun tak nga ai lam langai: Kachinland Shawnglame“majan kasat nga ai Myen Hpyen Dap gaw President Thein Seinamatsun hpe lale ai ngu tsun kajai nga ai lam gaw njaw ai..Bamar Tatmadaw gaw President Thein Seinamatsun npuematsun hte maren hkrak bungli galaw nga ai re” ngu asan sha tsun dan ai lam chye lu ai, matut nna U Thein Htay tsun ai gaw Ya President Thein Sein hpe mungkan kaw na grai shakawn shagrau nga ai ten hta nanhte ya na zawn ninghkap ai lam gaw grai nhtap htuk na re ngu tsun wa ai shaloi Kachin Alliance ningbaw ni hku nna gumsan Thein Sein hpe ka ai laika hpe hti dan nhtawm angwi apyaw bai nhtang wa sai lam Kachin Alliance ningbaw ni kaw na chye lu ai shiga ni hpe matut htawn shalai dat ai rai.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:45 PM No comments:
OPEN LETTER TO PRESIDENT THEIN SEIN
The Kachin Alliance, representatives of the Kachin community in the US, extendsawarm welcome as you arrive in this country to attend the UN General Assembly.
We laud your efforts to bring about political and economic reform to Myanmar. We sincerely hope that will extend your efforts to bringing about true peace and reconciliation, so that the Kachin in Myanmar will be able to enjoy the benefits of your reforms.
The US Kachin community is deeply concerned that the civil war being waged in the Kachin area has remained unabated since the resumption of hostilities in June, 2011. As you may be aware, this has caused untold miseries to tens of thousands of our kinsmen who have had to flee homes and villages, and are in dire need of the most basic of human needs. They are having to live in constant fear and uncertainty, driven back into conflict zones from camps along the China border, and their rights violated, even in the sanctity of church-run camps in government controlled territory.
We wish to reiterate here, the historical fact that it is mainly due to our forefathers’ trust in Gen. Aung San’s promise of equal rights that the Union of Burma came into being. Staying loyal and true to their commitment to the Union, Kachin servicemen fought valiantly alongside other hill tribe troops to stave off the danger posed by the myriad of insurgencies that emerged soon after independence, saving the young nation from disintegrating. The tributes paid by the late Prime Minister U Nu in his Kachin State Day messages, stand testimony to this fact. It is unfortunate that this trust has been eroded to such an extent that government troops are now waging war against the descendants ofapeople who once came to the rescue of the Union.
Trusting in your strong, progressive leadership, we firmly believe peace is possible and that now is the time to strive for real and decisive peace. The people of Myanmar, and indeed the whole world, are watching and waiting for you to take the pivotal steps that will lead toajust and lasting peace, not just ceasefires that fail to deal with the root causes of ethnic discontent. We therefore, urge you and your administration to grasp this moment to bring about peace, as those who achieve peace now will gain honor in history, and those who do not will be condemned to sustain the failures of the past.
We would also like to take this opportunity to urge you to resolve the following peace-related issues:
Beginapolitical dialogue leading toagenuine federal union that guarantees equality and self-determination for ethnic nationalities.
Initiate and declare an end to offensive war against all armed ethnic nationalities forces by issuingapublic statement.
Promote transparency by declaring actual casualty and financial cost of current civil war.
Show kindness to Burmese soldiers by NOT sending them to harm’s way to fight in an unjust war.
Stop the harassment, interrogation, and detention of the innocent Kachin civilians by the local authorities.
Assurance ofafree flow of domestic and international aid for Kachin IDPs, as the solution to the IDP problem needs to beaprerequisite to any and all future talks, military or political.
Allow the presence of UN observer teams or intermediary teams in conflict zones and IDP camps to monitor and prevent human rights abuses.
We thank you for your attention, and trust that you will use all the powers vested in you as President, to bring about unprecedented peace and prosperity, inatruly democratic federal union.
For the cause of peace, justice and equality in Burma,
Kachin Alliance of United States of America
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:27 PM No comments:
Wednesday, September 26, 2012 12:51 PM
In response to your recent public comments in the United States regarding the conflict and human rights violations in Kachin State, Kachin communities world-wide would like to take this opportunity to invite you to visit internally displaced people (IDP) forced to live in makeshift camps in Mai Ja Yang, Kachin State.
We Kachin had looked to you to speak out about the abuses being committed against our people at least based on humanitarian grounds as you were once silenced by the same regime and were eventually triumphant by unwavering voices of freedom. If you were to speak out, the international community would listen, all the people of Burma regardless of ethnicity or religion will stand up for the wholesale principles of democracy and human rights. Asarenowned champion for human rights, by not condemning the abuses in Kachin State you are not only condoning the state-sanctioned violence, but you exemplified to the masses in the country that the notion of conditional human rights is tolerated.
We are concerned by your comments at the London School of Economics in the United Kingdom, June 2012, when you stated that there wasaneed to establish the facts of the root cause of the Kachin conflict. Further, in your meeting with the Burmese Community in the USA on 22nd September, you stated: “Basically, what is it that I have to strongly condemn? If it isahuman rights violation as well as any acts of breaching the rule of law then I will strongly condemn.”You are yet to takeastance on the human rights abuses taking place in Kachin State, your statement, combined with the comments you made at the LSE gives the impression to the people of Burma and international community that you do not believe human rights abuses are taking place.
“…attacks against civilian populations, extrajudicial killings, internal displacement, the use of human shields and forced labour, and the confiscation and destruction of property. He has also received reports of gang rapes by army soldiers, although the numbers provided by different sources vary. In the report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence, it was noted that as many as 32 women and girls throughout Kachin State were allegedly raped by the military between June and August 2011.”
All Kachin Students and Youth Union (AKSYU)
Kachin Women's Association Thailand (KWAT)
Kachin Association of Australia (KAA)
Kachin Refugee Committee-Malaysia (KRC)
Kachin National Organization (KNO-Japan)
Kachin National Organization (KNO-Denmark)
Kachin Christian Fellowship (KCF-Denmark)
Kachin National Organization (KNO-USA)
Kachin National Organization (KNO-United Kingdom)
Kachin National Organization (KNO-India)
Kachin National Organization (KNO-Malaysia)
Kachin National Organization (KNO-Australia)
Kachin Community in United Kingdom
Kachin Community in Sweden (KCS)
Kachin Community in Netherlands (KCNL)
Kachin Alliance (USA)
Queensland Kachin Community
Singapore Kachin Community
· Gumsan (USA), +1 443 415 8683
· Dr. Nawmai Maran (USA), +1 402 990 2553
· Naw San (Thailand), +66 (0) 848119594
· Moon Nay Li (Thailand), +66 (0) 856251912
· Hkahpa Tu Sadan (UK), Mobile: +44 (0) 7538 258961
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:55 PM No comments:
ကချင်ဒေသဟာ မြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက်က ဗမာလက်အောက်ခံမဟုတ်။ သီးခြားလွတ်လပ်သော ပြည်နယ်သာဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးယူကာနီးအခါမှသာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ကချင်၊ ရှမ်း စတဲ့ တောင်တန်းဒေသတွေကို သွားရောက်ပြီး ဗမာပြည်မအတူ တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်ရေး ယူချင် ပါတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကုို တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တွေကဆီက ရယူနိုင်အောင် စည်းရုံး နိုင်ခဲ့တယ်။ ပင်လုံစာချုပ်အရ လွတ်လပ်ရေးတာနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လို လွတ်လပ်တဲ့ သီးခြားပြည်နယ် ထူထောင်နိုင် စေရမယ် ဆိုတာလည်း ပါပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗမာစစ်တပ်တွေက ကချင်တပ်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တချို့ဗမာတွေက စစ်ဖြစ် တယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်စလုံးက မှားလို့ဆိုပြီး ယောင်ဝါးဝါးပြောနေကြတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်မှာ ဗမာတပ် တွေက ကချင်ဒေသကို သွားကျူးကျော်လို့ဖြစ်တာလား။ ကချင်တပ်တွေက ဗမာနယ်ကို လာကျုးကျော် လို့ဖြစ်တာလားဆိုတာကို သေသေချာချာလည်း စဉ်းစားကြစမ်းပါဦး။ကိုယ့်ဒေသကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် လာရင် ဘယ်သူမဆို သဘာဝကျကျ ခုခံတော်လှန်ကြမှာချည်းပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတောင် နယ်ချဲ့တွေ ကို အနုနည်းနဲ့မရရင် အကြမ်းနည်းနဲ့ ချရမှာပဲလို့ ပြောခဲ့သေး တယ်။
တကယ်တမ်းမှာ ကချင်တွေက ခွဲထွက်ခွင့်တောင် မတောင်းသေးပါဘူး။ တန်းတူညီမျှခွင့်ပဲ တောင်းသေး တာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့ ခွဲထွက်ချင်တယ်ဆိုလည်း လွတ်လပ်စွာ ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒါကို တချို့ဗမာတွေက ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲလိမ့်မယ် ဘာညာ အသံ ကောင်းဟစ်ပြီး သူများမြေကုို သူများဆန္ဒမပါဘဲ မောင်ပိုင်စီးချင်နေကြတာကတော့ သူတော်ကောင်း အလုပ်မဟုတ်၊ ဓားပြအလုပ်သာ ဖြစ်တယ်။
Aung Naing Moe FaceBook မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:51 AM No comments:
Letter to UN General Secretary from KNO
Presented to UN General Secretary September 2012-Final Version 23-09-12
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:45 AM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:03 PM No comments:
ဒီချုပ် ပြောတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဘယ်တော့ … ဘာကြောင့် … ဘယ်လို
(Tu Maung Nyo)
၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂
ဒီချုပ်ပြောတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုတာ “လာမယ် – ကြာမယ်- မျှော်”ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ထင်ပါတယ်။
ဒီချုပ် မှာ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ၊ ညီလာခံခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေ တော့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်အတွက် အလှည့်မကျနိုင်သေး ဘူးလို့ ထင်မြင် ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း “ဒီလှိုင်းစာစောင်” အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၂၊ (၂၇ – ၈ – ၂၀၁၂) မှာ “အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးလှုပ်ရှားမှု ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာလျှင်” ဆိုတဲ့ “ဒီလှိုင်းအာဘော်” ကနေ တို့ထိထား တာလေး ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
“ဒီလှိုင်းအာဘော်” ထဲမှာရေးထားသလို သမ္မတက “ဖွင့်ဟပေးလိုက်သကဲ့သို့” ရှိတဲ့ အခြေခံဥပဒေ
ပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တစ်ခွန်းမှ မဟဘဲ၊ ဥပဒေကြောင်းအရ မှန်တယ် ဘက်ကို ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြစ်တင်နုတ်ထွက်စေတဲ့ လမ်းကြောင်း နောက် ဒီချုပ် အမတ်တွေ ကောက် ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ဦးသိန်းစိန်လမ်းကြောင်း ( ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး) နဲ့ ဦးရွှေမန်း လမ်းကြောင်း ( စွပ်စွဲ ပြစ်တင်နုတ်ထွက်စေရေး) လမ်းကြောင်း ၂ ခု အနက် ဒီချုပ်အမတ် တွေဟာ ဦးရွှေမန်းလမ်းကြောင်းကို လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
“— ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး မိမိထံ ခွင့်ပန်ကြားရင်းနဲ့ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကိစ္စပြု လုပ်တဲ့အခါမှာ မိမိသည်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိပါတီသော်လည်းကောင်း လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားတဲ့ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း ရှိပါ ကြောင်း၊ ဒီလိုလည်း မိမိထံ တင်ပြသွား တာရှိပါတယ်။ ”လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်အစည်းအဝေး မှာ ပြောပါ တယ်။
“ဒီလှိုင်းအာဘော်” မှာ ညွန်းထားတဲ့ လောလောဆယ်အားဖြင့် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ပယ် အစားထိုးရန် လိုအပ် သော “အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ခု” ဆိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ “အထူးကြေညာချက် ၄/၀၃/၀၈ ” ကို ရည်ညွန်းပုံရပါတယ်။
“လစ်ဟင်းခဲ့ပါတယ်” လို့ ကျမ်းသစ္စာကိစ္စမှာတုန်းကလို ထပ်ပြီးမပြောကြရအောင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ၊ ဖြုတ်ပယ်အစားထိုးရန် လိုအပ်တဲ့ အချက်များကို ဒီချုပ်ဥပဒေပညာရှင်များအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး တိတိ ကျကျနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါ တယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခ့ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုတာ ဒီကနေ့တည်ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်ထဲက အမတ်အချိုးအစား နဲ့ဆိုရင် မလွယ်ကူဘူး/ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ လူပြိန်းတောင်သိပါတယ်။ ဒီချုပ်အမတ်တွေက စစ်သား အမတ်တွေကို စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် မလွယ်ကူပါဘူး/ မဖြစ် နိုင်ပါဘူး။
ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ က “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေးကော်မတီ” ဖွဲ့စည်းရာ မှာ စစ်သား အမတ် တစ်ဦးထည့်ပေးဖို့ အဆိုပြုပုံရပါတယ်။
“ကျွန်မကတော့ တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်မယ်ဆိုရင် တာဝန် ကျေချင်တယ်။ ကျေအောင်လည်း ဆောင်ရွက် မယ်။ ကျေအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မဖြစ်ဘူး။ ကော်မတီမှာ ပါဝင်ကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ကော်မတီ မှာ ထည့်ပေးပါ” ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော့် ကို တစ်ဖန်ပြန်လည် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လိုလားဆန္ဒရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကို ဒီကော်မတီထဲ ကိုရောက်ရှိရေးအတွက် ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာတော့ ဒါတစ်ဖွဲ့တစ်ဦးပဲရှိပါ တယ်” ဆိုပြီး ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအချက်သေချာစေဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ (၁)နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ (အခြား ကော်မတီ)လို့ဆိုတဲ့ ကော်မတီနဲ့ ကော်မရှင်များကို တစ်ခုချင်း ကျနော် စိစစ်ကြည့်ပါတယ်။ ယခုအခါ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် “အခြားကော်မတီ” ၂၀ နဲ့ ကော်မရှင် ၁ ခုဖွဲ့ စည်းထားပါတယ်။
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်) စာမျက်နှာ ၅ နှင့် ၆ မှာဖေါ်ပြပါရှိတဲ့ “အခြားကော်မတီ” (၁၉)ခုကို စိစစ်ကြည့်ရာမှာ ကော်မတီ(၁၉)ခုအနက် ကော်မတီ(၅) ခုမှာ စစ်သား အမတ်များအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါရှိနေတာကို အောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
- ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ကိုကို နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ
- ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆန်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ
- ဗိုလ်မှူးတက်ထွန်းအောင် တရားစီရင်ရေးနှင့်ဥပဒေရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
- ဗိုလ်မှူးကြီးဌေးနိုင် ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ
- ဗိုလ်မှူးသန်းဇော်ဦး ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ
ဒါ့အပြင် တစ်ခုတည်းသောကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့ “ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ် များလေ့လာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်” မှာ လည်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ခင်သိန်း ပါဝင်နေ တာကို တွေ့ရပါလိမ့် မယ်။
သို့သော်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ စစ်သားအမတ်တွေ “အခြားကော်မတီ”တွေနဲ့ကော်မရှင်တွေမှာ မပါဝင်စေဖို့ (ကာလုံ) ထဲမှာ သူတို့ချင်း ညှိလိုက်ကြပုံပေါ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီမှာ စစ်သား အမတ်တွေပါနေရင် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာ များကိုလွှတ်တော်ထဲမှာ မဲခွဲအဆုံး အဖြတ်ယူတဲ့အခါ စစ်သားအမတ်အများစုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပုံရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကော်မတီတွေမှာ ယခင်ကအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ်ထည့်ထားခဲ့တဲ့ စစ်သားအမတ်တွေကို ဖယ်ထုတ် အစားထိုးလိုက်ပုံရပါ တယ်။
ယခုအခါ ပြည်သူ့လွှတ်တော် website မှာ ကို ဖေါ်ပြထားတဲ့ “အခြားကော်မတီများစာရင်း” နဲ့ မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်) စာမျက်နှာ ၅ နှင့် ၆ မှာဖေါ်ပြပါရှိတဲ့ “အခြား ကော်မတီများစာရင်း” ကိုနှိုင်းယှဉ်စိစစ်ကြည့်လျှင် အဆိုပါ စစ်သားအမတ်များကို အခြားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ လဲလှယ်အစားထိုးထားတာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းရဲ့ခါးပိုက်ဆောင်ကော်မရှင်(ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်)မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခင်သိန်းဟာ စစ်သား အမတ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) စစ်ဥပဒေ ချုပ်ရုံးမှ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္တပုံမှန် အစည်း အဝေး(၂၁) ရက်မြောက်နေ့မှာ (၂၀)ခုမြောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး ကော်မတီ” မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စစ်သားအမတ်တစ်ယောက် ရရှိရေး ဒီချုပ် ဥက္ကဋ္ဌတောင်း ဆို ချက် မရနိုင်ဘူး/မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းသွားပါတယ်။
စစ်သားအမတ်တွေအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ အဖြစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ် တွေကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ်စီမံနိုင်ပါတယ်။
“အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂ ခု” ခုဆိုတာဟာ လောလောဆယ် ပြင်ဆင်အစားထိုးရန်သာဖြစ်ပြီး ဒီချုပ်ရဲ့ အရင်းမူလသဘောထား အဖြစ် ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ သဘောထားကို “ဒီလှိုင်းအာဘော်” မှာ အောက်ပါ အတိုင်း အတိအလင်း ထည့်သွင်းရေးသားဖေါ်ပြထားပါ တယ်။
“ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ကား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖာထေးပြုပြင် နေရုံမျှဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ထိရောက်ထွန်းပေါက် အကျိုးသက်ရောက် စေနိုင်လိမ့်မည် ဟု မယုံကြည်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တစ်ရပ်လုံးကို ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ပြောင်းကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဆီလျော် အပ်စပ်မှုရှိစေရန် အတွက် အသစ်ရေးဆွဲ ခြင်းသည်သာ အလျော်ကန်၊ အသင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆပေသည်။ ”
သို့သော်လည်း ဤအရာကား “ဒီလှိုင်းအာဘော်”မျှသာဖြစ်သည်။ “ဒီချုပ်အာဘော်”မဟုတ် ဟုပြောလာ လျှင် မည်သို့ရှိမည်နည်း။
“ဒီချုပ်နဲ့ သော့ခလောက်ကြီး အာဘော်ဆောင်းပါး” တွင် ကျနော်တို့ မျက်စေ့လည်ခဲ့ရဖူးပြီ။
သို့အတွက် ဒီချုပ် ပြောတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဘယ်တော့ — ဘာကြောင့် — ဘယ်လို ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခွင့်အလန်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို ပြည်သူများ၊ ဒီချုပ်ပါတီဝင် များ၊ အခြားသော မဟာမိတ်ပါတီများ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိရှိစေရန် ဖော်ထုတ် တင်ပြ အသိပေးသင့်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:07 PM No comments:
Open Letter to Daw Aung San Su Kyi
၂၀၁၂-ခု စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်၊
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရောက်ရှိနေသော ကချင်တိုင်းရင်းသားမိဿဟာရအဖွဲ့မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆို ပါသည်။ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှ ချီးမြှင့်သောဆုတံဆိပ်ကို လက်ခံရယူရန်ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အထူးဝမ်း မြောက်ဂုဏ်ယူမိကြပါသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် ဤ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူဖွယ်အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြောကြား လိုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ရှိကာလ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော မိမိတို့၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ လျစ်လျူရှုခံနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကို သတိချပ်မိပါသည်။ မိမိတို့အားလုံး ၀မ်း နည်း ပူဆွေးသောကများ ဖိစီးမှုဖြင့် ကြေကွဲလျက်ရှိနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်မက်ဘေးဒဏ် ကြောင့် မိမိတို့၏ ကချင် လူမျိုးများ သောင်းနှင့်ချီ၍ နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေရသည့် ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် အကြောက်တရား များ၊ မရေရာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး၊ အခြေခံ ကျသော လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံလည်း လိုအပ်လျက်ရှိ ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အာဏာပိုင်များ က နယ်စပ်တွင် ခိုလှုံနေကြရသော ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များကို စစ်မက်ဒေသသို့ အတင်း အဓမ္မပြန်လည် ပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်း ခံနေရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု နယ်ပယ်တွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းများ၏ အရိပ်အာဝါသတွင် ခိုလှုံနေသော ဒုက္ခသည် များပင်လျင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပါသည်။ ဤသို့သောအခြေအနေများတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ရန်မှာ မည်သို့မျှ ဆီလျော် အပ်စပ်ခြင်း မရှိပါ။
အများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုခံရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဖခင် အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အား အမှူးပြု၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကျင့်ဝတ်သိက္ခာခွန်အား၊ နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ် ပြုထားသောဂုဏ်ဒြပ်၊ လွှတ်တော်တွင် အင်အားကြီးမားသော အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ခြင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရာကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်ခြင်းတို့ကို အမှီပြု၍ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေးများအတွက် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လေးစားစွာပန်ကြား အပ်ပါသည်။
တန်းတူအခွင့်အရေးရမည်ဟုပြောခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကတိက၀တ်အပေါ် ယုံကြည်ခဲ့၍သာ မိမိတို့၏ ဘိုးဘေးများအနေဖြင့် မြေပြန့်ဗမာတိုင်းရင်းသားများနှင့် လက်တွဲ၍ ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ် အပေါ်တွင် သစ္စာရှိစွာဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ပုန်ကန်ထကြွမှု အမျိုးမျိုးတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှု ဘေးအန္တရာယ်ကို အခြားတောင်တန်းဒေသတိုင်းရင်းသား ရဲဘော်များ နှင့်အတူ ရဲဝံ့စွာတွန်းလှန်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမည့် အရေး ကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဦးဆုံးသောဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုမှလည်း ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မိန့်ခွန်းများတွင် အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို အလေးထား၍ ကျေးဇူးတင်စကား အမြဲတစေပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါအချက်များကိုထောက်ရှု၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် စွမ်းစွမ်း တမံ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၁။ စစ်မှန်ပီပြင်သောငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိစေရန်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရုံမျှဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိမည် မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကိုဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊
၂။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် လိုအပ်သော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အထောက်အပံ့များ လွတ်လပ်စွာပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်၊
၃။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အင်အားကို ရယူကာ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အတွက် အသုံးပြုနေသောစစ်အသုံးစရိတ်များကို တားဆီးပေးရန်၊
၄။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ¾လေ့လာ စောင့်ကြည့် ရေး အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့များ အနေဖြင့် စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသောဒေသများနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် အချိန်မရွေးသွားရောက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်၊
၅။ မြစ်ဆုံဆည်နှင့်အတူ ချီဖွေဆည်ကဲ့သို့သော ဧရာဝတီမြစ်ဖျားတွင် တည်ဆောက်ရန်ရှိသော အခြားဆည် (၆) ခုအား ယာယီရပ်ဆိုင်းရုံသာမကပဲ လုံးဝဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုတော့ရန်၊
ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကံအကြောင်းမလှသဖြင့် ဆောလျင်စွာ ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ အတွက် ပေးအပ်ထားသောကတိစကားကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဤကဲ့သို့ ပင်လုံ ကတိက၀တ် တွင်ပါရှိသော တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ် ခံရခြင်းသည် ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ၏ အခြေခံအကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီး ပီသစွာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များအတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါရန် အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
The Kachin Alliance, representatives of the Kachin community in the US, wishes to extendawarm welcome to you on your momentous visit to this country, and offer heartfelt congratulations on the great honor of receiving the Congressional Gold Medal.
We Kachins cannot, however, participate in this joyous occasion, as our hearts are heavy with sadness and trepidation, mindful of the untold miseries our kinsmen in Kachinland are currently going through. We feel that it is inappropriate for us to rejoice and celebrate when the tens of thousands of our people displaced by renewed fighting are in dire need of the most basic of human needs, when they have to live in constant fear and uncertainty, when Chinese authorities have dismantled refugee camps on their borders and sent them back into conflict zones, when their rights are being violated even in the sanctity ofachurch-run camp in government controlled territory.
We earnestly appeal to you in the name of your revered father, the architect of independence, General Aung San, to use your moral authority, your international stature, and powerful position in parliament as opposition leader, and Chair of the Rule of Law Committee, to be an advocate for the rights of our people. It isameasure of the trust our forefathers put in General Aung San’s promise of equal rights that they rejected the British offer ofaseparate homeland, and opted to formaunion with the lowland Burmans. Staying loyal and true to their commitment to the union, they fought valiantly alongside other hilltribes servicemen to stave off the danger posed by the myriad of insurgencies that emerged soon after independence, and saved the union from disintegrating. The first prime minister of the Union, the late U Nu, had often paid tribute to this fact in his Kachin State Day messages.
May we therefore, take this opportunity to implore your intervention in the following issues critical to the well-being of the Kachin people:
A free flow of domestic and international aid for Kachin IDPs, as resolving the IDP problem needs to beaprerequisite for any and all future talks, military or political.
Presence of UN observer teams or intermediary teams in conflict zones and IDP camps to monitor and prevent human rights abuses.
Urge government to beginapolitical dialogue leading toagenuine federal union that guarantees equality and self-determination for ethnic nationalities
Parliamentary steps to cut off military spending for the Kachin war asameans of bringing the decades long civil war to an end.
End, not just suspend, construction of the Myitsone Dam and6other smaller dams on the tributaries of the Irrawaddy, which spells ecological disaster not just for Kachin State but for the entire country.
We trust that you will beachampion of ethnic rights as your father was, and help restore the rights that were denied us after his tragic and untimely death, for it is the denial of rights that is at the root of our discontent.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 11:23 AM No comments:
Labels: Burmese, English, O
US Jinghpaw Wunpawng ni Myen Gumsan Thein Sein hpe...
Interview: Kachin Peace Network and General Sumlut...
ပေးစာ - အဝေးေ၇ာက် ဖ၇ဲရွာသားများသို့ 
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစိုးရ ဖက်ကသာ မျက်ကွယ်ပြု နေသည်ဟ...
အိုင်းအနာကြီးပေါ်က အနာလေးကိစ္စ …